Somaliland: 'Boqolka Dollar' waxa lagu sarifayaa 1030,000 Shls
Somaliland: ‘Boqolka Dollar’ waxa lagu sarifayaa 1030,000 Shls
Barkhad Axmed Coofiye wuxuu kamid yahay Sarifleyaasha Hargeysa
Hoos u dhaca sarifka lacagta Somaliland, ayaa maraya halkii ugu hooseeyey, waxaana cirka isku shareeray Sicirka lacagta dollar-ka lagu sarifo.
Boqolka Dollar, ayaa lagu sarifayaa magaalada Hargeysa Hal milyan iyo soddon kun oo shillin (1030,000 shls), sida uu STNTV u sheegay Barkhad Axmed Coofiye oo kamid ah Sarifleyaasha Magaalada Hargeysa.
Shacbiga Somaliland ayaa si weyn uga cabanaya dhibaatooyinka ka dhashay hoos-dhaca sarifka lacagta dalka, taasoo sababtay culays dhanka dhaqaalaha ah oo soo waajahay dadka nolol-maalmeedka iyo Mushaharka ku qaata Shillinka dalka.
Mushkilada jahawareerka Sarifku waxay soo taxnayd tan iyo horaantii sanadkan, dawladduna waxba way ka qaban wayday.
Madaxweynaha cusub ee la doortay Muuse Biixi Cabdi, ayaa balan-qaaday inuu wax ka qaban doono aafada Sicir-bararka, Shaqo la’aanta iyo Musuqmaasuqa.
Arrimahan oo dhan waa kuwo xal u heliddoodu ku sugayaan Xafiiska uu la wareegi doono 14 Bishan December.
Previous: Xiddigaha Geeska: laab-saalax ma isagaa go’aansaday xil-ka-qaadista lagu sameeyey?
Next: Salaadiin, Siyaasiyiin iyo Wax-garad la kulmay Muuse Biixi